नेकपा एकीकरण : हलो कहाँ अड्कियो ? | जनदिशा
नेकपा एकीकरण : हलो कहाँ अड्कियो ?
janadisha March 1, 2019	No Comments KP and PKnekapanekapa ekata
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकतापश्चात् नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) गठन भएको ९ महिना पूरा भइसकेको छ । गत जेठ ३ गते दुई दलबीच औपचारिक एकता भई नेकपा गठन भएको थियो । पार्टी एकता घोषणा भएको ९ महिना पूरा भइसके पनि दुई दलबीचको एकताले पूर्णता पाउनुको सट्टा विवाद झनै बल्झिंदै गएको छ ।
खासगरी पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालबीच रहेको शत्रुताका कारण एकता प्रक्रियाले पूर्णता पाउन असम्भवजस्तै देखिंदै गएको छ । ओलीले पार्टीलाई एकलौटी रुपमा चलाउने धृष्टता गरेको भन्दै केन्द्रीय सदस्यको चयन, प्रदेशमा नेताहरुको जिम्मेवारी बाँडफाँड, प्रदेश कमिटीमा गरिएको एकलौटीलगायतका विषयमा नेपाल पक्षले खुलेरै असहमति मात्र होइन, विरोध जनाउँदै आएको छ ।
माधव नेपाल समूहको अवरोधकै कारण पार्टीको सांगठनिक एकता प्रक्रियाले पूर्णता पाउन नसकेको ओली पक्षको आरोप छ । गत असोजमा बसेको सचिवालय बैठकले प्रदेशको इञ्चार्ज, सह–इञ्चार्ज, अध्यक्ष र सचिव तोकेपछि ओली र नेपाल पक्षबीचको विवाद सतहमै देखिएको थियो । खासगरी दोहोरो जिम्मेवारी दिन नहुने अडान राख्दै क्रमशः ४ र ५ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री रहेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र शङ्कर पोखरेललाई पार्टीको इञ्चार्जको जिम्मेवारी दिन नहुने अडान नेपाल पक्षले राख्दै आएको छ ।
ओली र नेपाल समूहको लडाइँमा नेकपाभित्रको पूर्व माओवादी केन्द्र समूहगत रुपमा देखिने गरी कतै पनि उभिएको छैन । पूर्व एमालेभित्र देखिएको सङ्घर्षलाई सकभर मिलाउन प्रयत्न गर्ने नसके तटस्थ बस्ने रणनीतिमा रहे पनि पछिल्लो समय पूर्व माओवादी केन्द्रमा रहेका केही व्यक्तिहरु चलखेल गर्न लागेको सङ्केत पाएपछि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माधव नेपाल पक्षले उनीहरुलाई आफ्नो पक्षमा पार्न कोसिस गरिरहेको बुझिएको छ ।
‘अध्यक्ष ओली कमरेडले पार्टीलाई एकलौटी चलाउन खोज्नु भएको छ । सरकारको त कुरै नगरौं । हाम्रा साथीहरुलाई यस्तो पेलिएको छ कि कुनै पनि सरकारी नियुक्तिमा ढिम्किन दिइएको छैन’, माधव नेपाल समूहबाट स्थायी समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने एक नेताले जनदिशालाई बताए । ‘सरकारप्रति जनताले ठूलो भरोसा गरे पनि प्रधानमन्त्री ओलीजीले त्यतापट्टि ध्यान दिन सक्नु भएन । उहाँका आसेपासेका इच्छा पूरा गर्नका लागि मात्रै पार्टीमा यति धेरै कमरेडहरु लाग्नु भएको होइन’, उनले भने, ‘सरकारलाई धेरै काम गर्ने अवसर थियो । पार्टीभित्रका समस्याका विषय धेरै उठाउँदा सरकारलाई अप्ठेरो नपरोस् भनेर यतिञ्जेल धैर्यतापूर्वक बस्यौं । सुधारका लागि हल्का विरोध ग¥यौं । अब त सरकारले पनि एक बर्ष पूरा ग¥यो । पार्टी एकता भएको पनि लगभग एक बर्ष पूरा हुनै लाग्यो । ओलीजीले पार्टी र सरकार दुबै सञ्चालनमा सहमति र सहकार्य होइन, अर्को पक्षलाई निषेध गर्न सबै ताकत लगाउनु भयो । घटनाक्रमलाई हेर्दा अब पनि उहाँ बढ्ने त्यसरी नै हो । हामी पनि अब चूपचाप सहेर बस्ने अवस्थामा छैनौं ।’
दुई पार्टीबीच एकता हुँदा तीन महिनाभित्र सांगठनिक एकतालाई टुङ्गो लगाउने सहमति भएको थियो । तर ९ महिना वितिसक्दा पनि एकता प्रक्रिया टुङ्गिन सकेको छैन । पार्टी एकता हुँदाताका पूर्व एमाले र पूर्व माओवादी केन्द्रबीच केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश र जिल्लाको नेतृत्व तथा सदस्यहरुको छनौट र जिम्मेवारीमा विवाद देखिए पनि पछिल्लो समय नेकपाभित्रको दृश्य बदलिएको छ ।
पूर्व एमाले र पूर्व माओवादीभन्दा पनि पूर्व एमालेभित्रको गुट समीकरणले नेकपाको एकतालाई जटिल मोडतर्फ धकेलेको छ । सतहमा नेकपाभित्रको पूर्व माओवादी समूह भने हल न चलको अवस्थामा पुगेको छ ।
कुनै पनि गुटको प्रभावकारी हस्तक्षेप हुन नसकेको अवस्थाबाट यतिबेला नेकपा गुज्रिरहेको छ । पार्टीभित्र चर्किएको ओली र नेपाल गुटको लडाइँका कारण एकता प्रक्रिया जटिल बन्दै गएको र यसले नेकपाको एकता र भविष्यमाथि नै प्रश्न उब्जिएको नेकपामा एक नेताले बताए ।
पार्टीभित्र मौलाएका विवाद समाधानका लागि रामबहादुर थापा ‘बादल’को नेतृत्वमा महासचिव विष्णु पौडेल सम्मिलित ९ सदस्यीय कार्यदल गठन ग¥यो । कार्यदलमा सहमति भएका विषय दुई अध्यक्षलाई बुझाउने र सहमति जुट्न नसकेका विवादित विषयलाई दुई पार्टी अध्यक्ष र स्थायी समितिले मिलाउने भनेपछि त्यसमा असहमत कार्यदलका सदस्यले आफ्नो मत बुझाएका छन् ।
कार्यदलमा रहेकामध्ये सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, बेदुराम भुसाललाई माधव नेपाल पक्षको मानिन्छ । वर्षमान पुन र लेखराज भट्ट पूर्व माओवादी केन्द्रका रहे पनि कार्यदलमा रहँदा उनीहरुले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको चाहनाविपरीत माधव नेपाल पक्षसँग मिलेको आरोप ओली पक्षले लगाएका छन् ।
बादल संयोजक रहेको कार्यदलमा रहेकामध्ये महासचिव विष्णु पौडेल, स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेल र रघुवीर महासेठ गरी पूर्व एमालेका ३ जना मात्र प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा देखिए । पूर्व माओवादी केन्द्रका वर्षमान पुन र लेखराज भट्टले साथ दिएपछि आफ्नो बहुमत पुग्ने भएपछि माधव नेपाल पक्षले विवाद समाधानका लागि गठन गरिएको कार्यदलले अल्पमत र बहुमतका आधारमा निर्णय गर्नु पर्ने अडान राखेको थियो ।
बहुमत र अल्पमतका आधारमा निर्णय गर्दा विवाद झनै बढ्ने र पार्टीका हरेक निर्णय अल्पमत र बहुमतका आधारमा गर्दा एकता प्रक्रिया र पार्टी सञ्चालन झनै जटिल बन्ने निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओली पुगेको बालुवाटार स्रोतले बतायो । विवाद समाधानका लागि गठन गरिएको कार्यदललाई नै विवादित बनाइएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले कार्यदल नै विघटन गरिदिए ।
‘कार्यदल विवाद समाधानका लागि गठन गरिएको संयन्त्र मात्र थियो । यो पार्टीको कुनै कमिटी थिएन । त्यसले विवादका विषयमा पार्टीलाई सुझाव मात्र दिन सक्ने थियो’, ओली निकट एक नेताले जनदिशालाई बताए, ‘सुझाव दिने हैसियतमा बनाइएको संयन्त्रले पार्टी अध्यक्षलाई चुनौती दिन सक्दैन । अब यो कार्यदलले दिएको सुझाव पनि कार्यान्वयन हुँदैन ।’ उनले भने, ‘पार्टी सञ्चालनको मुख्य जिम्मेवारी पाएका अध्यक्षलाई नै चुनौती दिन ल्याइएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता अध्यक्षलाई छैन ।’
पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई जसरी पनि घुँडा टेकाउने माधव नेपाल र नेपाल पक्षलाई कसैगरी पनि टाउको उठाउन नदिने ओली पक्षको नीतिले नेकपाको एकता प्रक्रियालाई नै सङ्कटमा पु¥याउने त होइन ? प्रश्न उठेको छ । ओली र नेपाल पक्षबीच पार्टीभित्र बढ्दै गएको शीतयुद्धले दुई तिहाईको सरकारका कामकार्वाही पनि प्रभावित बनेका छन् ।
एकता प्रक्रियाले पूर्णता नपाउँदा लाखौं कार्यकर्ता जिम्मेवारीविहीन बनेका छन् । सरकारका नीति र योजना कार्यान्वयन र सरकारको बचाउमा लाग्ने मुख्य शक्ति कार्यकर्ता पङ्क्ति निराशा र अकर्मण्यतामा फसेका छन् । कार्यकर्तामा बढेको यो निराशा र अकर्मण्यताले न ओली, न नेपाल पक्ष वा प्रचण्ड पक्षलाई नै फाइदा पुग्नेछ । यही प्रक्रिया जारी रहे कार्यकर्ता नेकपालाई कुरेर बस्ने अवस्थामा सधैं रहने छैनन् । र, पार्टी नै विघटन हुनसक्ने खतरा पनि देखिन्छ ।
केही समय अघि माधव नेपाल स्वयम्ले संसदमा देश डुबेको भन्दै उद्दारका लागि माझी दाइ गुहारेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू अमेरिका भ्रमणमा रहेका बेला सरकारविरुद्ध आफ्नै सहयात्री लागेको भन्दै अमेरिकाबाटै प्रतिवाद गरेका थिए ।
ओलीले भनेका थिए, ‘केही मान्छेमा अलिकति कुण्ठा देखिन्छ, त्यो कुण्ठा पोख्न विभिन्न प्रकारका कुरा गरेको सुनियो, एउटा कृत्रिम परिस्थिति निर्माण गर्न खोजिएको छ, यो गलत हो । उता देशै डुब्न लाग्यो भनेर बडा चिन्ता गरेको सुनियो । म भन्न चाहन्छु, म आउँदैछु । अब देश डुब्दैन ।’
पार्टी एकता, सरकार र प्रधानमन्त्री ओलीलाई असफल पार्न माधव नेपाल पक्ष लागेको ओली पक्षको बुझाइ छ । नेपाल पक्षलाई पूर्व माओवादी केन्द्रका केहीले साथ दिए पनि समूहगत रुपमै नेपाल पक्षलाई साथ दिइनसकेको पनि ओलीनिकट एक नेताले बताए । नारायणकाजी श्रेष्ठ, वर्षमान पुन, लेखराज भट्टलगायतका केही नेता ओलीविरुद्ध लागे पनि अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलगायत पूर्व माओवादी केन्द्रका अधिकांशको समर्थन ओलीलाई रहेकोले पार्टी एकताले पूर्णता नपाउँदै पार्टी विभाजन नहुने उनले जनदिशालाई बताए ।
Previous Previous post: यौन तथा प्रजनन अधिकारका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगतिः उपप्रधानमन्त्री यादव
Next Next post: विमानस्थलमा एक्सरे मेशिन बिग्रिएकोले सुरक्षामा चुनौती